Magaalaa Shabeetti sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame - NuuralHudaa
Magaalaa Shabeetti sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame
On Jan 27, 2019 2
Godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo magaalaa Shabeetti mata duree “mana Rabbii haa ijaarruu” jedhuun, sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffamaa jira. Kaayyoon sagantaa kanaa, gamoo masjiida Al-kawsar kan magaalaa Shabeetti ijaaramaa jiruu xumursiisuuf galii walitti qabuuf kan qophaa’e tahuu gabaafame.
Sagantaa kana irratti hawaasni muslimaa lakkoofsan hedduu tahe fi keessummoonni iddoo gara-garaa irraa dhufan, kan irratti hirmaataa jiran tahuu odeeyfannoo ni addeessa. Ustaaz Hayder Khadiir fi Ustaaz Rayyaa Abbaa Maccaa saganticha irratti kan argaman tahuunis beekkameera.
Godina JimmaaOromiyaaSagantaa Da'awaa
May 19, 2022 sa;aa 6:08 pm Update tahe